English – ဆရာမောင်ခိုင်
Let's Make Learning English A Breeze!
အင်္ဂလိပ်စာကို လွယ်ကူရိုးရှင်း ထိရောက်တဲ့နည်းနဲ့ သင်ရအောင်
ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပေါင်း (၅၀) ပါဝင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနာရီပေါင်း (၃၅၀း၄၉) ပါဝင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးစုံ (၁၂၀) ပါဝင်ပါတယ်။
Zoom Live Sesson (၅)ကြိမ် ပါဝင်ပါတယ်။
စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ
စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားသော ဗီဒီယို သင်ခန်းစာများဖြင့် လေ့လာ သင်ယူရမှာ ‌ဖြစ်ပါတယ်။
အတန်းတခုအတွက် စီစဉ်တားတဲ့ သင်ခန်းစာများကို မတတ်မချင်း အထပ်ထပ် လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာတိုင်းအတွက် အရည်အချင်း စစ်ဖို့ရန် စိတ်ဝင်စားစရာ ပျော်စရာ လေ့ကျင့်ခန်းများ ပါဝင်ပါတယ်။
သင်တန်းအဆင့်အားလုံး ပြီးမြောက်တဲ့အခါ ပြီးဆုံးကြောင်း အောင်လက်မှတ်ကို အလိုအလျောက် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ပို့ချတာကို အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်လွင့်မှာလား?
မဟုတ်ပါဘူး။ စနစ်တကျ ကြိုတင်စီမံပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများနှင့် သင်ကြားရေးအတွက် လိုအပ်သော teaching material အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု သင်ကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင်ခန်းစာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်သည်အထိ အထပ်ထပ်အခါခါ လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (သီချင်းတပုဒ်ကို အလွတ်မရမချင်း အထပ်ထပ် အခါခါ နားထောင်ရသလိုမျိုးပေါ့)။
သင်တန်းကာလ သတ်မှတ်ထားတာ ရှိပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ ရှိပါတယ်။ ဒီအခြေခံတန်း တခုလုံးကို ပြီးစီးအောင်လုပ်ဖို့ တစ်နှစ်တိတိ ပေးထားပါတယ်။ တစ်နှစ်အတွင်း မပြီးနိုင်ပါက သင်ခန်းစာကို ဆက်လက်သင်ယူနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိမိမပြီးသေးပဲ ကျန်နေတဲ့အပိုင်းကို သီးသန့်ပြန်ယူပြီး သင်နိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာတခုချင်းအတွက် စာစစ်တာကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရပါသလဲ?
သင်ခန်းစာတိုင်းမှာ မေးခွန်းတို၊ ကွက်လပ်ဖြည့်၊ မှား/မှန်‌ရွေး၊ မေးခွန်းတို/ရှည် စသည်ဖြင့် အဆင့်အလိုက် အရည်အချင်းစစ်နည်း စုံစုံလင်လင် ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာတိုင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှတ်ရမှသာ နောက်သင်ခန်းစာကို ဆက်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာစစ်တာမအောင်မြင်လို့ ဆက်လက်သင်ယူခွင့် ဆုံးရှုံးတာမျိုး ရှိနိုင်ပါသလား?
ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အကြောင်းတခုခုကြောင့် တစ်နှစ်အတွင်းမပြီးနိုင်ခဲ့ရင် သင်ခန်းစာကို လက်လက်သင်ယူခွင့် ဆုံးရှုံးသွားမှာမို့လို့ပါ။
စာစစ်တဲ့အခါ အောင်မှတ်သတ်မှတ်ထားတာမျိုး ရှိပါသလား?
ရှိပါတယ်၊ သင်ခန်းစာတစ်ခု အောင်မြင်ပြီးမြောက်ဖို့ ရမှတ်(၇၀)မှတ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ရမှတ် (၇၀)မှတ်မရမချင်း နောက်သင်ခန်းစာကို ဆက်သွားခွင့် မရှိပါဘူး။ မဖြစ်မနေ နားလည်တတ်မြောက်ပြီး အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် မေးခွန်းများကို အကြိမ်ရေ အကန့်အသတ်မရှိ ဖြေဆိုခွင့် ပေးထားပါတယ်။
သင်တန်းပြီးဆုံးတဲ့အခါ သင်တန်းအောင်လက်မှတ် ရမှာလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ ရမှာပါ။ ဤသင်တန်းတခုလုံး ပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာ သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်း လက်မှတ်ကို ဤသင်တန်းစာမျက်နှာမှ PDF ဖိုင်ဖြင့် အလိုအလျောက် ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံနှိပ်လိုပါက ၎င်း PDF ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး ပုံနှိပ်လိုက်ရုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင်တန်းအပ်စဉ်မှာ မိမိလက်မှတ်ပေါ်တွင် ပါရှိစေလိုသည့်အတိုင်း အမည်မှန်ဖြင့်သာ စာရင်းဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ဤသင်တန်းမှ အောင်လက်မှတ်ကို အသိအမှတ်ပြုမှု ရှိပါသလား?
ဒီသင်တန်းဟာ ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းဖြစ်ပြီး မည်သည့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်မျှ ပူး‌ပေါင်း (Affiliate)ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာကို တတ်အောင်သင်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခြားပညာရေးဆိုင်ရာ၎ါနနှင့် အသင်းအဖွဲ့များအတွက် Credit ရေတွက်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင်တန်းတက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် အတန်းအပ်နိုင်ပါပြီ။
Level 1 အခမဲ့တန်း
Level 1-6 သင်တန်းအပြည့်အစုံ
ဤစာအုပ်သည် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည့် သင်ခန်းစာများကိုသာ ထုတ်နှုတ် ထားသည့် “လို၊ တို၊ ရှင်း” ပုံစံဖြင့် အထူးပြင်ဆင် ထားသည့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်သည့် စာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။
လူကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ရသည့် အတန်းများတွင် အချိန်ပေးပြီး အင်္ဂလိပ်စာကို တကူးတက မသင်ယူနိုင်သည့် သူများအတွက် သွားလေရာ ယူသွားပြီး မိမိ အဆင်ပြေသည့် အချိန်တွင် သင်ခန်းစာများကို အဆင့်ဆင့် တက်လှမ်း သင်ယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အခြေခံ အဆင့်မှစ၍ အလယ်အလတ် အဆင့်အထိ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက် နေသူများနှင့် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များတွင် အဆင့်မြင့်ပညာ ဘာသာရပ် အမျိုးမျိုးကို သင်ယူ နေကြသူများ အတွက် ထိရောက်သည့် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
တိကျသေချာပြီး အသင့်လျော်ဆုံး လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ် လမ်းညွန်ပေးသည့် မြေပုံတခုအတိုင်း ခရီးသွားရဘိ သကဲ့သို့ တော်သင့်သော အချိန်၊ အားထုတ်မှုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် လိုရာခရီးကို ရောက်နိုင်စေရန် လက်စွဲတခု ဖြစ်စေဖို့ အထူးရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
© 2021 ဆရာမောင်ခိုင်